မော်ဒယ် F-7016 အရွယ်အစားကက်ဘိနက်:1010*5800*860မီလီမီတာ、ကြည့်မှန်:830*1150mm ထိုင်းနိုင်ငံ၏သပိတ်ပင် Countertop သဘာဝစကျင်ကျောက်ဝှမ်း 1280 ℃တစ်ချိန်ကကြွေထည်ကိုပုံသွင်းသည်. Glaze အထူ>1.1mm Mirror Thailand သပိတ်ပင်ဘောင် ,5မီလီမီတာကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်အရောင် C87 ပုလဲဖြူ Hardware Hardware DTC ပျော့ပျောင်းသောပတ္တာ & အနိမ့်ဆုံးအံဆွဲဆလိုက် 1. အစိုင်အခဲ ThailandOak သစ်သား. 2. ရေစိုခံ & duarable အစိုင်အခဲ ...
မော်ဒယ် F-7206 အရွယ်အစားကက်ဘိနက်:1250*600*860မီလီမီတာ、ကြည့်မှန်:1200*160*1030မီလီမီတာပစ္စည်းအမေရိကန်သပိတ်ပင် Countertop သဘာဝစကျင်ကျောက်ဝှမ်း 1280 ℃တစ်ချိန်ကကြွေထည်ကိုပုံသွင်းသည်. Glaze အထူ>1.1မီလီမီတာကြေးမုံအမေရိကန်ပိတ်ပင်ဘောင် ,5မီလီမီတာကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်အရောင် C62 walnut ဖွင့်လှစ်ဆေးသုတ် (မူရင်းသစ်သားစပါးကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်) Hardware DTC အပိတ်ပိတ်ထားသောပတ္တာ & အထိုးမခံရသည့်အံဆွဲလျှော…
မော်ဒယ်က F-7032 အရွယ်အစားကက်ဘိနက်:1200*600*860mm ကြေးမုံ:1000*1075မီလီမီတာပစ္စည်းအမေရိကန်သပိတ်ပင် Countertop သဘာဝစကျင်ကျောက်ဝှမ်း 1280 ℃တစ်ချိန်ကကြွေထည်ကိုပုံသွင်းသည်. Glaze အထူ>1.1မီလီမီတာကြေးမုံအမေရိကန်ပိတ်ပင်ဘောင် ,5မီလီမီတာကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်အရောင် C51 အဖြူဖွင့်ဆေးသုတ် (မူရင်းသစ်သားစပါးကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်) Hardware DTC အပိတ်ပိတ်ထားသောပတ္တာ & အထိုးမခံရသည့်အံဆွဲလျှော…